नेपालमै नयाँ ट्राफिक नियम-" प्रचण्डको सवारी अगाडी मोटरसाइकल कुदाउँदा १५०० जरिवाना !"
काठमाडौँ- विराटनगरस्थित भाटभटेनी सुपर स्टोर अगाडी इटहरीका सरोज कार्कीको लाइसेन्स प्रहरीले जफत गर्दाको घटनाले धेरैलाई चकित बनाउन सक्छ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सवार गाडी अगाडि मोटरसाइकल चलाएको कारण प्रहरीले उनको लाइसेन्स जफत गरेको बुझिएको छ। कोसी अञ्चल अस्पतालमा रहेकी बिरामी ठुली आमालाई खाना लिएर हिँडेका अवस्थामा उनको लाइसेन्स जफत गरिएको थियो।
को १९ प ७३५५ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रहेका सरोजलाई प्रहरीले मोटरसाइकल रोकेर लाइसेन्सनै जफत गरिदिएका हुन् ।
प्रचण्ड सवार रहेको गाडीको अगाडी मोटरसाइकल कुदाउन नमिल्ने भन्दै उनको लाइसेन्स जफत भएको थियो। कोसी अञ्चल अस्पतालको बेड नम्बर १२८ मा उपचाररत ठुली आमालाई खाना पुर्‍याउने हतारमा रहेका सरोजको खुल्ला सडकमा सवारी चलाउने अधिकार मात्र हनन् गरिएन, थप १५ सय जरिबाना तिर्नु पर्ने चिट पनि काटियो।
आफूबाट प्रचण्डको सवारीलाई कुनै पनि खतरा नहुने बताएका सरोजलाई प्रचण्ड सवार गाडी अगाडी नजाने समय सम्म रोकी राखियो। लाइेन्स खोसिएपछि उनले मोटरसाइकल र हेल्मेट पनि प्रहरीलाई बुझाए पछि मात्रै मेन रोडमा नगुड्ने शर्तमा उनलाई चाबी र मोटरसाइकल दिइएको थियो।
ट्राफिक नियममा कुनै पनि नेताको सवारी साधन अगाडी सवारी गुडाएकोमा कारवाही हुने व्यवस्था भने नभएको जानकारहरु बताउँछन्। आफूले कुनै नियम नतोडेको भएता पनि ट्राफिकले १५ सय जरिबाना तिराएको कार्कीको आरोप रहेको छ।
तर यसबारे जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङकाले भने केहि थाहा नभएको बताएको छ। यस विषयमा सामाजिक संजालमा अहिले धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस्तै प्रतिक्रिया दिने क्रममा केहिले बहने प्रचण्डको सवारी साधन अगाडी सवारी चलाउन नपाइने नयाँ कानुन भन्दै व्यंग गरेको सामाजिक संजालमा देखिएको छ।
प्रकाशित : सोमबार, कार्तिक १९, २०७५२०:२०
भारतीयलाई छुटाउन स्थानीयले गरे प्रहरी चौकीमा आक्रमण!
पत्रकारहरु सरकारको कामप्रति सकारात्मक भई समाचार लेख्नुपर्छ : सभामुख महरा !
चितवनमा वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण,सुर्खेतमा घुस लिँदै गर्दा मालपोतका कर्मचारी पक्राउ!!
जिपले ठक्कर दिँदा सख्त घाइते ज्योतिलाई हेलिकप्टरद्वारा काठमाडौँ ल्याइयो !
तीव्र गतिमा हाँकेका मोटरसाइकल दुर्घटना हुदाँ दुईको मृत्यु